XOG: Mareykanka Oo Lacago Waali ah Ku bixinaya Doorashada Soomaaliya Ee 2021 – XAMAR POST
By Zakariye iiman Last updated May 8, 2020
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, oo shalay jir jaraa’id oo dhanka muuqaalka intenetka ah u qabtay suxufiyiinta Muqdisho, ayaa sheegay in qambsoomidda doorashooyinka Soomaaliya ay u diyaariyeen lix milyan oo dollar.
“Waxaan heynaa lacag aan ku caawineyno doorashada taasi oo dhan qiyaastii lix milyan oo dollar, oo 4 milyan oo ka mid ah aan hadda gacanta ku hayno,” ayuu yiri Yamamoto.
“Doorashada soo socota, muhiimada waa qabashada doorashada waqtigeeda, waa inaad aamintaan tani waa midda aan kala hadlay madaxwayne Farmaajo, ra’iisul wasaraaha, gudoomiye Xaliimo Yareey iyo beesha caalamkaba, muhiimada ugu weyn waa qabashada doorashada waqtigeeda,” ayuu yiri danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay muhiimadda ah in la qabto doorasho dadka ay codeynayaan iyo in laga gudbo nidaamka qabiilka ku dhisan.
“Waxaan dooneynaa in habkii qabiilka laga gudbo, oo baarlamaanka ay dadka doortaan, markaaas wax waliba oo aad rabtiin waan idinka taageyreynaa 100 %, sababta oo ah waa doorashadiina, sidaas darteed waxaan bixineynaa taladda ugu fiican,” ayuu yiri Yamamoto.
Al shabaab Oo War Naxdin leh kasoo saray dilka ciyaaryahan hore Gaatamow.